Logitech Combo Touch, ny keyboard tsara indrindra ho an'ny iPad Pro | Vaovao IPhone
Luis Padilla | 04/08/2021 12:00 | iPad Pro, maro
Taorian'ny volana maro nampiasana ny Apple Magic Keyboard mahafinaritra ho an'ny iPad Pro, dia toa sarotra tamiko ny nanandrana fitendry hafa handresy lahatra ahy bebe kokoa, saingy ny zava-misy dia rehefa afaka herinandro maromaro dia mampiasa ny Logitech Combo Touch vaovao ho an'ny iPad Pro isan'andro. 12,9 "na dia maharary aza ny miteny azy, Amin'izao fotoana izao dia nanapa-kevitra ny hamela ny Magic Keyboard ao anaty boaty aho, ary holazaiko anao ny antony.
1 Volavola sy famaritana
2 Kitendry sy Trackpad
Ity kitendry Logitech ity dia misy ampahany roa samy hafa tsara: fonony aoriana izay hiaro ny iPad Pro anao amin'ny lafiny rehetra sy ny aoriana, ary ny klavier izay koa ny fonony voalohany an'io tranga io. Mahaleo tena ireo singa roa ireo, ary azo sarahina mora foana, satria manatevin-daharana ny andriamby. Amin'ny alàlan'ny fanatonana akaiky kokoa ny lafiny iray ihany dia hiditra ho azy izy ireo.
Mety ho toa zavatra tsy misy dikany izy io, saingy io no iray amin'ireo toetra tena tiako indrindra amin'ity cas-keyboard ity: azonao atao ny mampiasa ny iPad-nao tsy misy kitendry, nefa tsy mahafoy ny fiarovana omen'ny raharaha anao. Azonao esorina ao anatin'ny iray segondra ny kitendry raha tianaoAzonao atao mihitsy ny mamadika azy io ary mametraka azy ao aoriana, hihazonana izany amin'ny tananao. Rehefa mila ny klavier indray ianao, segondra iray ary efa vonona ny handeha io.
Ny fonony aoriana dia manarona ny lafiny rehetra sy ny aorian'ny iPad, mamela ny lavaka mifandraika ho an'ireo mpandahateny, mikrôfôna, fakan-tsary ary ny mpampitohy USB-C amin'ilay takelaka. Ireo lavaka ho an'ny mpandahateny ireo indrindra no mamaritra fa tsy mifanaraka amin'ny iPad Pro 12,9 "2021 vaovao fotsiny izy io, amin'ny maodely teo aloha dia tsy hifanaraka tsara izy ireo, na dia tsy mandeha tsara aza ny zava-drehetra. Raha dinihina ity dia ny keyboard keyboard voalohany izay navoakan'i Logitech ho an'ny iPad Pro lehibe an'i Apple, mety tsy hanelingelina anao io tsy fanelingelenana kely io.
Na ny fonony aloha na ny aoriana, ary koa ny zavatra rehetra manodidina ny fanalahidy sy ny trackpad, dia rakotra fitafiana volondavenona misy fikasihana somary masiaka, mahafinaritra be. Izy io dia fitaovana tena mahatohitra izay mora diovina. Io fitaovana io ihany no entin'ny klavier hafa an'ny marika, ary azoko atao ny manamafy amin'ny zavatra niainako fa mahatanty tsara ny fandehan'ny fotoana. Ny fahatsapana ny mikasika dia tsara lavitra noho ny plastika amin'ny Magic Keyboard, tsy misy isalasalana.
Eo an-damosina ny fijoroana, hevitra tsara satria amin'izay dia tsy mila ilay sombin-tsarimihetsika hitazomana ny iPad ianao, toy ny tranga misy amin'ny kitendry hafa. Ahafahana zoro mihazona malalaka, manomboka amin'ny mahitsy hatrany amin'ny saika fisaka, mety amin'ny fampiasana Apple Pencil. Mety tsy hiteraka fahatokisana firy izy io amin'ny voalohany, satria nitranga tamiko io tamin'ny kitendry voalohany nataoko tamin'ity rafitra ity, ary koa ny Logitech, saingy mahatohitra kokoa noho ny mety ho toa azy. Ankoatr'izay, ny fihazonana dia mafy orina, ary tsy misy ny écran raha mihetsika ianao rehefa mampiasa azy, na dia mikasika ny rantsan-tànanao amin'ny rantsan-tànanao aza ianao.
Na izany aza, ity rafitra ity dia misy fatiantoka izay mety ho zava-dehibe amin'ny maro: tena sarotra, saika tsy azo atao, ny manoratra amin'ny iPad mivantana amin'ny tongotrao. Tsy dia mampiasa ny iPad toy izao aho, fa raha ny fomba fampiasanao azy no tsara kokoa dia aleo mitady fitaovana fanampiny hahafahana mametraka azy. Izy io koa dia mahatonga ny iPad miaraka amin'ny keyboard misokatra misimisy habaka betsaka kokoa noho ny amin'ny Magic Keyboard. Tsy misy ny fahalavorariana.
Hadinoko ny nanampy fa ny tranga dia mamela anao hametraka ny Apple Pencil amin'ny toerana famenoana azy, amin'ny alàlan'ny rafi-magnetika mahafinaritra. Ity maodely Combo Touch ity dia tsy ahitana ny saron'ireo maodely hafa hanakatonana ny kitendry ary handrakofana ny Apple Pencil, hisorohana azy tsy ho latsaka tsy nahy. Ka, toy ny Apple's Magic Keyboard, amin'ity kitendry ity dia mila mitady ilay Apple Pencil ao ambanin'ny kitapoko koa aho Ny roa isaky ny telo.
Iray ihany ny zavatra tsy hitako momba ny Magic Keyboard: ny fifandraisana USB-C. Izany dia manampy amin'ny iPad Pro. Azonao atao ny mamerina ny iPad raha mampifandray fitaovana amin'ny iPad-C an'ny iPad Pro. Saingy tsy zavatra ratsy izany raha jerena ny fiainana maharitra bateria an'ny iPad Pro.
Kitendry sy Trackpad
Logitech dia nisafidy ny Smart Connector hampandeha ny Combo Touch. Midika izany fa noho ny mpampitohy andriamby kely ao ambadiky ny iPad dia tsy mila mamerina ny kitendry isika, ary tsy mila mampiasa ny fifandraisana Bluetooth. Ny zava-drehetra dia miasa amin'ny fametrahana ny zava-drehetra amin'ny tranokalany, tsy misy rohy na bateria. Fahombiazana, indrindra raha ny momba ny klavier backlit, izay fantatsika fa ny bateria dia matetika tsy maharitra. Raha mbola manana batterie ny iPad Pro dia hiasa ity Combo Touch ity.
Kitendry feno izy io, miaraka amin'ny haben'ny lakileny mahazatra (backlit, efa nolazainay) ary miaraka amin'ny trackpad somary lehibe kokoa, lehibe kokoa noho ny Magic Keyboard. Mamaly ireo lakile, miaraka amin'ny dia kely noho ny fitetezana birao an'ny Logitech izay efa nosedraina hatrizay, toa ny fanalahidy amin'ny Mac na Magic Keyboard ihany. Tsy afaka milaza fahasamihafana tsikaritra aho rehefa manoratra amin'ny fitendry roa. Ary ny trackpad dia vita tsara, mety hisy hilaza fa novokarin'i Apple izy io, satria miasa toa ny MacBook rehetra izy. Mekanika izy io, ary mamaly ny tsindry bokotra rehetra, na dia eo an-jorony aza. Mazava ho azy fa multi-touch izy io ary mamela fihetsika mitovy amin'ny trackpad an'ny Magic Keyboard.
Ary eto dia tonga ny iray amin'ireo endri-javatra lehibe an'ity fitendry ity: ny laharan'ny bokotra fiasa eo ambonin'ny isa. Tsy azoko hoe ahoana no tsy nanoloran'i Apple ny laharan'ny lakileny teo amin'ny kitendry, satria tsy dia azony izy ireo ka rehefa natolony anao tampoka izy ireo dia tsy afaka manao intsony ianao raha tsy misy azy ireo. Asehoy ny fanaraha-maso ny famirapiratana, ny mahita, ny fanaraha-maso ny jiro, ny filalaovana ary ny fifehezana ny haavony… Izy io aza dia manana lakile "mody" sy lakile hanidiana ny iPad.
Logitech dia nanao ny Combo Touch keyboard hisongadina eo amin'izay tsy ahombiazan'ny Magic Keyboard: fiarovana sy andalana fanampiny fanalahidy. Raha ity no ampiantsika fa amin'ny ambiny mampiavaka azy dia mitovy amin'ny keyboard Apple, ny tena izy dia ny "kilema" kely an'ity fitendry ity dia tsy afaka manakana antsika tsy hiteny hoe, tsy misy isalasalana, ny kitendry tsara indrindra izay azo vidiana amin'ny iPad Pro 12,9 ”. Ny vidiny koa dia ambany lavitra noho Apple: € 229 mivantana ao amin'ny Apple Store (rohy).
Navoaka tamin'ny: 4 Aogositra 2021
Fanovana farany: 4 Aogositra 2021
Kalitaon'ny fitaovana ary
Kitendry feno backlit
Andalana fanampiny fanalahidy fiasa
Tsy misy bateria na Bluetooth
Trackpad multi-touch miaraka amin'ny valiny tena tsara
Case sy keyboard dia azo sarahina
Tsy manana fifandraisana USB-C fanampiny
Maka habaka bebe kokoa noho ny Magic Keyboard
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Logitech Combo Touch, ny keyboard tsara indrindra ho an'ny iPad Pro
Mijanona amin'ny sonia ny iOS 14.7 i Apple
Apple no orinasa mahazo tombony be indrindra manerantany araka ny lisitra Fortune Global 500